Al Shabaab Oo Weeraro Safballaaran ah ku qaaday Saldhigyo Melleteri oo kuyaal degmada Afmadoow.
Thursday May 30, 2019 - 11:27:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa markale ka dhacay mid kamida magaalooyinka gobolka Jubbada hoose oo ay gummeysiga ku heystaan ciidamada Kenya.
Wararka ka imaanaya degmada Afmadoow ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay xalay gudaha degmada iyo hareeraheeda ku dhaxmareen ciidamada cadowga Jinsiyadaha kala duwan leh iyo xoogaga Al Shabaab.
Goob joogayaal ayaa sheegay in xoogag aad u hubeysan oo katirsan Shabaabul Mujaahidiin ay weeraro safballaaran ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay 'Jubbaland'.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dagaalkii xalay kula wareegeen inta badan saldhigyadii maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe ee gudaha Afmadoow.
Sidoo kale Al Shabaab waxay dagaal muddo saacada ah socday lagashay ciidamada gummeysiga Kenya ee saldhigga melleteri ku leh duleedka degmada Afmadoow, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo hugunka rasaas xooggan oo labada dhinac isdhaafsanayeen.